Maxaad Ka Ogtahay Dagaalka Yaabka Leh Ee Sacuudiga Iyo IRAN Ku Dhex-maraya Yurub??
Denmar(Gebogebonews)-Maxkamad ku taalla magaaladda Roskilde ee dalka Denmark ayaa toddoba sanno oo xabsi ah ku xukuntay nin heysta dhalashadda dalalka Iran iyo Norway, kaasi oo lagu helay inuu basaasayay, isla markaana uu qorsheynayay inuu dilo dad Iran kasoo jeda oo xidhiidh la leh Sacuudiga, xilli loolanka u dhexeeya dalalkan ku hardamaya Bariga Dhexe uu ku faafay Qaaradda Yurub.
Maxamed Davoudzadeh Loloei waxaa sannadkii 2018-kii loo xidhay in uu basaasayay seddax nin oo u dhashay dalka Iran, kuwaas dibed joog ka ah dalkoodii, kuna nool Denmark, waxayna sheegteen ragaas in weerar dhimasho ay ka geysteen Iran. Maxamed waxaa uu akhbaarta ragaas u gudbin jiray madaxda iyo Sirdoonka dalka Iran.
Ragga uu ninkaan bartilmaameed sanayay waxaa iyagana lagu xidhay dalka Denmark horraantii sanadkaan, waxaana lagu eedeeyay in ay Sacuudiga u basaasayeen. Waxay sheegteen in aysan dambi lahayn.
Iran iyo Sacuudiga ayaa ku tartamaya hoggaanka Bariga Dhexe, waxayna isku adeegsan jireen ururro hubeysan oo ay isku weerari jireen gobolka dhexdiisa – laga soo bilaabo dalalka Yemen iyo Lubnaan. Fadhiyadda maatanaha ah ee maxkamadda kasoo muuqaneysa Europe waxay muujineysaa in labada dal ay tartankoodi ka rarayaan Bariga Dhexe, isla markaana Isku qabsanayaan gudaha qaaradda Yurub, iyagoo is basaasaya, is shirqoolaya, isuna adeegsanaya argagixisada, taasi oo khatar gelin karta xidhiidhka diblamaasiyadeed ee muhiimka u ah labada Dowladood.
Markii bishan June la ogaaday in seddax qof oo Iran u dhashay loo maxkamadeynayo in ay Sacuudiga u basaasayeen, goobo militari oo Iran leedahay ayaa Wasiirka arrimaha Dibadda ee dalka Denmark Jeppe Kofod waxaa uu u yeeray safiirka Sacuudiga u qaabilsan Denmark